कांग्रेस महाधिवेशन : भोलि बिहान ८ बजेदेखि मतदान हुने
शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि १३४ पदका लागि ५४८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन समिति संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार आइतबार (आज) ११ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय छ भने अन्तिम नामावली मध्यान्ह सवा १२ बजे सार्वजनिक गरिनेछ ।
‘अहिले ११ बजेसम्म उमेदवारी फिर्ताको समय छ । उम्मेदवारी फिर्ता गरेपछि कुनकुन पदमा सर्वसम्मत हुन्छ ? कुनकुनमा निर्वाचन हुन्छ ? हामीले सर्वसम्मत र निर्वाचन हुने पदहरूको अन्तिम नामावली आजै सवा १२ बजे प्रकाशन गर्नेछौं’, घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार केही कलस्टरहरूमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना देखिएको छ । सर्वसम्मत नभएका पदमा भने सोमबार (भोलि) बिहान ८ बजेदेखि निर्वाचन हुनेछ ।
कुन पदमा कति जनाको उम्मेदवारी ?
निर्वाचन समितिका अनुसार सभापति एक पदका लागि शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, युवराज न्यौपाने र कल्याण गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ ।
उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, सुजाता कोइराला र दिव्यश्वरी शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति : मंसिर २६, २०७८ आइतबार १०:११:१८, अन्तिम अपडेट : मंसिर २६, २०७८ आइतबार १०:१९:२२